लेखक: मैत्री झा
नोभेम्बर 25, 2021 मैत्री झा बैंक, फिजी, यात्रा, भिसा
के तपाईलाई फिजी यात्रा गर्न भिसा चाहिन्छ? जबसम्म तिनीहरू 109 भिसा-मुक्त देशहरू मध्ये एकबाट आउँदैनन्, फिजीका आगन्तुकहरूले फिजीका कूटनीतिक नियोगहरू मध्ये कुनै एकबाट भिसा प्राप्त गर्नुपर्छ। सबै आगन्तुकहरूसँग पासपोर्ट हुनुपर्छ
नोभेम्बर 25, 2021 मैत्री झा बैंक, फिजी
के तपाइँ फिजीमा स्थानान्तरण गर्ने विचार गर्दै हुनुहुन्छ? प्रवासीहरूको बैंकिङ र लगानीको आवश्यकता फरक छ। यस लेखमा एक्स-प्याट बैंकिङ, फिजी बैंकिङ, र फिजीमा बैंक खाता खोल्ने बारे जानकारी छ। फिजीको बैंकिङ प्रणाली अपेक्षाकृत सरल छ। धेरै बहुराष्ट्रिय बैंकहरु
संयुक्त राज्य अमेरिका मा कसरी काम पाउने
नोभेम्बर 21, 2021 मैत्री झा यात्रा
तपाईंले सँधै संयुक्त राज्य अमेरिकामा बस्न र काम गर्न आउने सपना देख्नुभयो। जबकि अमेरिका मा कडा अध्यागमन कानून छ, तपाईं अझै पनि केहि प्रयास र धैर्य संग आफ्नो सपना पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। गर्न सबैभन्दा लोकप्रिय तरीका
कुवेतमा कसरी काम पाउने? विदेशीहरू र कुवेतिसका लागि द्रुत मार्गनिर्देशन
नोभेम्बर 17, 2021 मैत्री झा जब, कुवेत
कुवेतलाई आधिकारिक रूपमा कुवेत राज्य भनिन्छ। यसको जनसंख्या को 70% भन्दा बढी विदेशी नागरिकहरु छन्। तेसैले, मध्य पूर्व मा यो देश पूर्व pats काम गर्न को लागी एक सही ठाउँ हुन सक्छ। यो काम गर्न को लागी एक उपयुक्त ठाउँ हो र
123 ... 23 अर्को पोस्टहरू»